[16 / 01 / 2020] Buma ọkwa ọkwa nke Buca Metro Tender	35 Izmir
[16 / 01 / 2020] Ndị ọrụ na-ahụ maka iwu ụgbọ ala Istanbul na-agwa: riesgwọ ọnwa bụ oge ezighi ezi, nri bụ Kurtlu	34 Istanbul
HomeGeneralỌrụNdị ọrụ na Mahadum İstanbul Cerrahpaşa
Na Official Gazette akara ụbọchị 657 ma jikọtara ya na Decree 4 na 06.06.1978 ka agbakwunye na Decree 7 na 15754 ka ewee rụọ ọrụ dị ka ndị ọrụ ha na nkwekọrịta dịka usoro 28.06.2007 (B) nke Iwu Ọrụ Ndị Ọrụ Mba. A ga-eweghachi ndị ọrụ nkwekọrịta na ọkwa ndị a dabere na ọkwa 26566 KPSS (B) n'usoro dị na paragraf (B) nke ọzọ ederede 2 na thekpụrụ na Ndozigharị nke forkpụrụ Maka Ọrụ Ndị Ọrụ Na-ahụ maka Ọrụ.
ISIOKWU NDỊ mmadụ
NUMBER mmefu ego NKWU NDỊ APPLICATION koodu
nurse 35 Mmefu ego pụrụ iche Nọọsụ nke Vlọ Akwụkwọ Ọgwụ Vocational Health
Ngụsị akwụkwọ sitere na.
2018 KPSS P94 Points Type 50 na
Inwe Ihe Isi H1
1- Ndị anamachọihe nke na-etinye akwụkwọ maka ọnọdụ pụrụ iche ndị a kpọtụrụ aha n'elu na Iwu 657 48. iji mezuo ọnọdụ izugbe akọwapụtara n'isiokwu ahụ.
2- Anaghị enweta ego ezumike nka ma ọ bụ ego ezumike nká ochie site na Sociallọ Ọrụ Ọchịchị Ọha na Ekele
3- Iji nabata ọnọdụ ịrụ ọrụ n'oge awa niile (gụnyere abalị) maka ọnọdụ niile, ka ndị okenye kpebiri ka arụ ọrụ kpebie ya na oge izu ọrụ agaghị agafe elekere 40.
4- Ndị ntinye akwụkwọ ga-enwerịrị ihe nyocha 2018 Public Personnel Selection Exam (KPSS). 2018 KPSS-P94 ga-adabere n'ụdị akara ahụ.
5- 5917 nke Iwu Nke 47. 5. Paragraf (A) N'ikwekọ na paragraf 2, 4-B kwụsịrị mgbe ọ na-arụ arụkwaghịm n'ọkwa ya mgbe ọ na-arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ nkwekọrịta; site na ụbọchị nkwụsị 1 (otu) afọ enweghị ike itinye akwụkwọ tupu oge ahụ.
Ndi akwukwo, n’ime ubochi ndi 15 site na ubochi ngosi nke ekwuputara na Gazette Official (rue na njedebe nke oge oru). www.istanbulc.edu.t bụ Biko dejupụta mpempe akwụkwọ na akwụkwọ anamachọihe dị na adres oflọ Akwụkwọ University na akwụkwọ ndị a n'onwe gị. Na ngwụsị nke ngwa ahụ, nsonaazụ nke Nnyocha Nhọrọ Ọha nke ọha na-ekwuputa na ndị aga-ahụ ga-enyocha ụlọ ọrụ anyị site n'aka Onye isi oche nke OSYM. Agaghị anabata ntinye nke ndị chọrọ ime ihe ngosi ụgha ma a ga-hazie ya dịka usoro iwu niile si dị. A ga-etinye akwụkwọ anamachọihe ahụ site na ịkọwa koodu ntozu chọrọ maka naanị otu ọnọdụ. Ọ bụrụ na etinyere karịa otu ngwa, akwụkwọ abụọ a ga-ewere dịka adịghị ike. A gaghị anabata ntinye akwụkwọ site na post. Ndị anamachọ ihe gbubiri ụbọchị ngwa ahụ ma ọ bụ ndị tozuru etozu ha agaghị anabata gị.
EGO NA-EKWU OKWU:
- Akwụkwọ Mpempe akwụkwọ Foto (Mpempe akwụkwọ nke edepụtara na ibe weebụ nke Mahadum ga-ejupụta na ya.)
- Kaadị njirimara mbụ na Photocopy
- A ga - anabata akwụkwọ nyocha nke mbụ na nke diplọma ma ọ bụ asambodo ngụsị akwụkwọ (a ga-anabata nsonaazụ gọọmentị.)
- Asambodo Ntugharị Nyocha 2018 KPSS
EGO NA AKPURU AKWPLTA:
Mgbe Kompeni nyochachara ngwa ndị ahụ, nsonaazụ ga-ebipụta na www.istanbulc.edu.tr kacha ọhụrụ n'ime ụbọchị ọrụ 7. A ga-ekpebi ọnụọgụ ndị nnọchi anya. Ọ bụrụ na ndị isi mmeri etinyeghị maka oge atọrọ, a ga-akpọ ndị ga - anọchi anya ndị mmeri nọchite anya otu. Ndepụta ndị a ga-ahọpụtara, akwụkwọ ndị achọrọ maka ịmalite ọrụ, oge na ebe a ga-etinye akwụkwọ ga-agbaso na www.istanbulc.edu.tr. Agaghị eme ndị maara ihe ọ bụla ma ọ bụ kwuo okwu ọ bụla.
* Ndị ahụ hụrụ na ha kwuru okwu ụgha ma ọ bụ zoo eziokwu n'ụzọ ọ bụla n'oge itinye akwụkwọ na usoro ọrụ ekenyela ya. Ọbụlagodi na ọ bụrụ na emebiela nkwekọrịta ahụ, a na-akwụsị ya. Ha enweghị ike ịnabata ikike ọ bụla.
* Ntọala nke iwu izugbe na-emetụta ndokwa ndị agụnyere na nkwupụta ahụ.
Mahadum Dicle ga-ewere ndị ọrụ ha ọrụ
Mahadum nke Cerrahpaşa Mahadum Istanbul nyere aka n'ọrụ ndị ọrụ
Akụkọ Juul Kachasị Elu Egwuregwu Kọmputa Ju Akụkọ
Iwu anakwere Izmir Zoning